Ikotishi #5, Amakotishi kaRobinson, anobungani bezilwane - I-Airbnb
Ikotishi #5, Amakotishi kaRobinson, anobungani bezilwane
Edmunds Twp, Maine, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Teresa & Bill
U-Teresa & Bill Ungumbungazi ovelele
Akhiwe enhliziyweni ye-Downeast Maine, amakotishi ethu ayindawo enokuthula. Ungajabulela ukudoba, ukuhamba ngesikebhe, ukubhukuda nokunye.
Le ndlu enezitezi ezimbili inendawo yomlilo enamatshe asensimini kanye nesitofu sezinkuni kanye ne-heater yokuqapha. Inekhishi elikhulu, indawo yokudlela, negumbi lokuhlala esitezi esingezansi. Phezulu kukhona igumbi lokugezela elineshawa namagumbi angu-4 alala angu-8. Kunamakamelo amabili anombhede ophindwe kabili namabili namawele angu-2. Umpheme omkhulu obonisiwe ubheke i-Robinson's Pond futhi usekupheleni komgwaqo wekotishi ngale kweCottage #4.
Ilokishi lase-Edmunds lisendaweni yasemakhaya kakhulu phakathi nemizuzu engama-30 yezinhlobonhlobo zamadolobhana asogwini nemisebenzi. Le ndawo inechibi elenziwe umuntu kanye nomfula iDennys. Futhi singamayadi angamakhulu ambalwa kuphela ukusuka ku-Sunrise Trail.
Izitolo eziseduze kakhulu zisePembroke, ibanga elingamakhilomitha ayi-6. Kukhona iDollar General kanye nezitolo ezimbili ezitholakala kalula. Lezi zinegilosa nezinketho zokukhipha. Indawo yokudlela eseduze kakhulu ingamakhilomitha angu-12 ukusuka kithi ePerry, kodwa iningi litholakala emadolobheni aseMachis, eCalais, e-Eastport naseLubec okuwuhambo lwamamayela angu-20-30. Izindawo zokudlela eziningi nezitolo zivala ngaphambi kwesikhathi lapha, ngakho-ke kungcono ukushayela amahora amaningi uma uhlela ukufika kamuva.
Wonke ama-cottage anekhishi ngakho-ke ukupheka ngokwakho kuyinketho. Iqhamuka enyakatho, isitobhi sokugcina sokudla yiCalais futhi sivela eningizimu, isitobhi sokugcina segrosa nguMachias. Zombili ziqhele ngamakhilomitha angaba ngu-25 ukusuka kithi.
Ibungazwe ngu-Teresa & Bill
Robinson's Cottages has been owned and operated by the Robinson family for 4 generations. The first cottage was built in 1920. Currently, my husband Bill and I run the cottages. Th…
Ngemva kokungena sixhumana nezihambeli njalo. Usale ukuze ujabulele iholidi lakho. Nokho, uma udinga usizo noma unemibuzo, sihlala khona kanye kule ndawo.
UTeresa & Bill Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Edmunds Twp namaphethelo